Ngaphambi kokukhetha ifayile ye- umatshini wokumisa isichumisi, Kuya kufuneka wenze uhlalutyo lokuqala lweemfuno zakho zokomisa:
Izithako zamasuntswana: Zithini iimpawu zomzimba xa zimanzi okanye zomile? Yintoni ukuhanjiswa kwegranularity? Inetyhefu, inokutsha, inokubola okanye irashe?
Inkqubo efunekayo: Uthini umxholo wamasuntswana? Ingaba ukufuma kwasasazwa ngokulinganayo ngaphakathi kwamasuntswana? Zithini iimfuno zokuqala kunye nezokugqibela zomxholo wamasuntswana? Bobuphi ubushushu obuvumelekileyo bokomisa kunye nexesha lokomisa amasuntswana? Ngaba ubushushu bokomisa kufuneka buhlengahlengiswe kuyo yonke inkqubo yokomisa?
Iimfuno zomthamo: Ngaba izinto kufuneka zenziwe ngokwamaqela okanye ngokuqhubekekayo? Zingaphi izinto eziphathekayo ekufuneka zenziwe umatshini wokumisa isichumisi ukuphatha ngeyure? Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana imveliso ekumgangatho ophezulu? Inkqubo yokuvelisa ngaphambi nasemva kokumisa ichaphazela njani ukhetho lweisomisi esomileyo?
Iimfuno ezisemgangathweni zeemveliso ezigqityiweyo: Ngaba izinto ziya kuncipha, zihlaziyeke, zomile ngaphezulu, okanye zingosuleleke ngexesha lokomisa? Umgangatho wokugqibela wokufuma kufuneka ube njani? Buyintoni ubushushu kunye noxinano lwevolumu yemveliso yokugqibela? Ngaba izinto ezomileyo zivelisa uthuli okanye zifuna ukubuyiswa kwakhona?
Eyona meko yokusingqongileyo yomzi mveliso: Ingakanani indawo yemveliso ekhoyo yokomisa inkqubo kumzi-mveliso? Buyintoni ubushushu, ukufuma nokucoceka komzi-mveliso? Yintoni isityalo esinezixhobo ezifanelekileyo zamandla, ikhupha igesi yezibuko? Ngokwemigaqo yokusingqongileyo yengingqi, sithini isixa sengxolo, ukungcangcazela, uthuli kunye nelahleko yamandla obushushu evunyelweyo kwisityalo?
Ngokujonga le micimbi, ezinye oomatshini bokumisa isichumiso ezingakulungelanga imveliso yakho yokwenyani ziya kususwa. Umzekelo, iimpawu ezibonakalayo okanye zokwenza izinto ezingafakwanga izinto ezingafakwanga ziya kukhetha ezinye oomatshini bokumisa isichumiso, Uhlobo loomatshini bokujikeleza lomatshini wokumisa isichumisi somxholo wokufuma okuphezulu, izinto ezibonakalayo ezibonakalayo ezinje nge-mica ayisiyonto ilungileyo. Inkqubo ye- Umatshini wokumisa isichumisi somatshini ojikelezayo Ukuhambisa izinto ngelixa uzomisa ngokujikeleza nangokuqengqeleka, kodwa oku kuhanjiswa kungahambisi kakuhle izinto ezibonakalayo kwi-outlet, njengoko izinto ezibonakalayo zibambelela kudonga lwegubu kunye nombhobho womphunga, okanye nkqu namahlwili. Kule meko, ukuhambisa okujikelezayo okanye ukungathanga ngqo koomatshini bokucoca isichumisi esingafaniyo kukhetho olungcono, ukuhanjiswa okusebenzayo, kunokudlulisa ngokukhawuleza imicah ukusuka kwizibuko lokutya ukuya kwizibuko lokukhupha.
Emva koko jonga a umatshini wokumisa isichumisi ehlangabezana nendawo yakho yokwenene kunye nendawo yemveliso. Ungabandakanyi nawuphi na umatshini wokumisa isichumiso ongalungelanga iimeko ezikhoyo zemveliso okanye ezifuna ukulungiswa kakhulu okanye ukwanda kweendleko. Kananjalo jonga uhlahlo-lwabiwo mali kunye neendleko zokusebenza kunye nezinye izinto.
Ukuba ukhetha umatshini wokumisa isichumisi ophezulu ukwenza inkqubo yakho ekhoyo yokomisa, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ngaba ezinye izixhobo ezikhoyo, ezinje Ukuhambisa, ukuhambisa, umatshini wokutyabeka, oomatshini bokupakisha, iindawo zokugcina izixhobo kunye nezinye izixhobo, zinokulinganisa ukwanda kwemveliso yoomatshini bokumisa isichumiso esitsha.
Njengoko uluhlu lweenketho zomatshini wokumisa isichumiso luyancipha, sebenzisa izinto esele zikhona kunye neemeko ezikhoyo zemveliso ukuvavanya ukuba umatshini wokumisa isichumisi ufanelekile ngokwenene.
● Ezona meko zokuma zome kakuhle.
● Iziphumo zomatshini wokumisa isichumiso kwiimpawu ezibonakalayo zempahla eluhlaza.
● Nokuba umgangatho kunye neempawu zezinto ezomisiweyo ziyahlangabezana neemfuno.
● Ingaba umthamo womatshini wokumisa isichumisi ufanelekile.
Ngokusekwe kwezi ziphumo zovavanyo, umenzi we umatshini wokumisa isichumisi ikwanokubonelela ngeengcebiso ezineenkcukacha zokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zakho zokomisa. Ewe kunjalo, ukufakelwa kunye nokusebenza kweendleko zomatshini wokumisa isichumisi kunye neemfuno zokugcina zomatshini wokumisa isichumisi akufuneki zihoywa.
Ukuthatha zonke ezi nkcukacha zingasentla, ungathenga ngokwenene oyena matshini wokumisa isichumiso ofanelekileyo.